Kioba: “Operation Cyber-Mambí” · Global Voices teny Malagasy
Kioba: “Operation Cyber-Mambí”
Voadika ny 13 Febroary 2011 8:15 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Nisy resaka betsaka nandeha ny amin'ny hoe mety hahita làlana ho tonga hatrany Karaiba ve ny fanahin'ny fanoherana niainga avy any Ejipta sy Tonizia. Havana Times manamarika hoe:
“Matahotra ny hisian'ny hetsi-panoherana mipongatra avy amin'ny aterineto ny governemanta Kiobana, izay mampiasa ny tambajotra sosialy hanomanana hetsika fanoherana azy toy izay nitranga tany Okraina, Iran ary ny haingana indrindra dia ny tao Ejipta sy Tonizia.”
El Pequeno Hermano manoratra:
Henoko daholo ireo tohan-kevitry ry zareo Ejiptiana. Ary heveriko fa tsy misy na iray aza, averiko tsara hoe iray, ka tsy azo ampiharina eto amin'ny fireneko. Hanoanana mitovy sy tsy fisian'ny fanantenana, fahatofohana itovizana noho ny tsy fahaiza-manaon'ny governemanta, ny karama farany ambany indrindra tsy ahafaha-mivelona, ny kolikoly, ny fiainana an-tsokosoko, ho fampitandremana, jereo fotsiny ny fari-piainan'ny kilasin-dry zareo mpitondra, ary ankehitriny, mahatsikaiky fa tafiditra ao anatin'ny lisitr'ireo firenena ahitàna tahan'ny tsy fanànana asa avo dia avo i Kioba.
Ary izao, tsy voasoroka intsony, tonga ny fanontaniana sarobidy hoe: Nahoana no tsy i Kioba koa?
Raha tsy maintsy hamaly izany aho, dia atomboko amin'ny fanasongadinana ny zava-misy saro-takarina: ny fifehezana ny fampahalalam-baovao…[eto Kioba] dia tena manovokovoka mafy mihoatra ny saina raha mitaha amin'ireo firenena nitrangan'ny hetsi-panoherana [tato ho ato].”
Raha ny fanakatsoana ny tsena anatiny amin'ny resaka fampahalalam-baovao ataon'ny governemantan'i Castro no rindrina manasaraka ny Kiobana tsy faly sy ny fihetsehana, tsy dia nahagaga loatra an'ireo mpitoraga bilaogy araka izany ny hetsika natao tsy ela akory izay. Lahatsary iray azo jerena ao amin'ny Vimeo na YouTube no nampibaribary ny tahotry ny governemanta ny ho fitroarana ao amin'io Nosy io ary ny ezaka ataony amin'ny tetika mampiasa mpitoraka bilaogy “manohitra-fiovàna” hifanandrina amin'izy ireny. Io dia iray amin'ny ezaka antsoina hoe “Operation Cyber-Mambí” izay soratan'i El Pequeno Hermano ho toy ny mariky ny “tsipaky ny miala aina ataon'ny governemanta hiatrehana ireo sehatra Fitorahana Bilaogy ”.
Maneho hevitra amin'ilay lahatsary, Yoani Sanchez dia milaza fa “tsy hampihontsona akory ny tontolon'ny fitorahana bilaogy Kiobana” raha ilay teti-panorona nasaina noraisina:
“ny fanelezana [ilay lahatsary] dia porofo miabo fa tsy manana samirery ny ampihimamba amin'ny fampahalalam-baovao intsony ny governemantantsika, tafiditra amin'izany ireo tsiambaratelony. Ho ela velona anie ny Cubaleaks!”
Manomboka tonga manampy tosika ny fitorahana bilaogy eto Kioba ankehitriny ny hafanam-po amin'ny Facebook, na farafaharatsiny izay no fahatsapana atolotry ny vondrona iray vaovao sy ny hetsika “Protestas mundiales por Levantamiento popular en Cuba” ary ny pejy, “por el levantamiento popular en Cuba” (mankasitraka ny hetsi-bahoaka ao Kioba), izay raha ny isan'ny mpikambana aminy dia niala avy amin'ny 600 tonga amin'ny manodidina ny 2200 tao anatin'ny dimy andro. Ekena anefa fa ilay pejy Facebook dia noforoninà Kiobana mpitsoa-ponenana mipetraka any Espana, saingy ny fanantenana dia ny hoe mba handrehitra ny fanoherana na avy ao anatiny , na avy any ivelan'ny nosy izy ireny ho setrin'ny fankalazana ny herintaona nahafatesan'ilay nitokona tsy nihinankanina, Orlando Zapato Tamayo.
Ilay sary toy ny hajia amin'ity lahatsoratra ity, “Cuban flag – Sainam-pirenena Kiobana”, dia avy amin'i Badly Drawn Dad, nampiasàna ny Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0) Creative Commons License. Tsidiho ny sary mifandimby ao amin'ny flickr an'i Badly Drawn Dad.